सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को लागि भिडियो च्याट विकल्प
लागि इन्टरनेट टेलीफोनी र भिडियो च्याट देखि छ, धेरै वर्ष को संख्या एक । कम्पनीहरु सफ्टवेयर प्रयोग को लागि इन्टरनेट भिडियो कन्फ्रेंसिंग र पनि काम साक्षात्कार लागि. तर यो सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम छ आफ्नो आवश्यकताहरु को लागि? विशेष गोपनीयता सम्बन्धित मुद्दाहरू बनाउन विकल्प रोचक छ । तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो भिडियो र च्याट थाहा कार्यक्रम पीसी लागि र स्मार्टफोन संग आफ्नो सम्बन्धित फाइदा छ । स्काइप सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न स्वतन्त्र छ र छ को पूर्ण व्यावहारिक कार्यहरु जो आवश्यक छैन तर, सबैलाई । फाइदा: कम्पनीहरु लागि, त्यहाँ छ को भुक्तानी संस्करण स्काइप व्यवसाय लागि, छ जो मा एकीकृत माइक्रोसफ्ट र सामग्री को कुराकानी सामग्री राम्रो सुरक्षा छ । डाटा सुरक्षा को मुक्त संस्करण आलोचना गरिएको छ विगतमा धेरै पटक.
सबै भन्दा साधारण अंक को आलोचना । एक संचार गर्नुपर्छ लागि निश्चित हुन सफ्टवेयर अघि सबै. यो सामग्री को भिडियो च्याट, साथै पठाए तस्बिरहरू र फाइलहरू सुरक्षित हुनु पर्छ तेस्रो पक्षहरूले अनाधिकृत पहुँच विरुद्ध छ । यो निम्न विकल्प प्रतिज्ञा एक व्यापक सुरक्षा को आफ्नो गोपनीयता छ । पछि टीम, बना छ को भन्दा बढी कर्मचारीहरु देशका — तिनीहरूलाई थुप्रै भाग थिए मूल स्काइप टीम । संग, युरोपेली कम्पनी क्रांतिकारी गर्न चाहनुहुन्छ अनुसार, यसको आफ्नै कथन, सुरक्षित संचार । तपाईं गर्न सक्छन् स्थानान्तरण, च्याट, डाटा, अडियो र भिडियो कल र सामग्री प्लेटफार्म जस्तै र भागहरु र सबै डाटा प्रसारित गर्न अन्त-देखि-अन्त इन्क्रिप्सन.
थप प्लस बिन्दु: छ द्वारा सुरक्षित युरोपेली डाटा सुरक्षा व्यवस्था
आफ्नो व्यक्तिगत डाटा भण्डारण गरिनेछ सर्भर मा पुगेको छ । के तपाईंलाई सम्झना तत्काल दूत, ? सेवा शुरू भएको थियो मा बजार र व्यापक प्रयोग मा निम्न वर्ष । तब देखि, प्रयोगकर्ता तिर्न, तर, परे । त्यतिन्जेलसम्म, यो अनुप्रयोग यसको अतिरिक्त भिडियो कल समर्थन बीच दुई भिडियो-सम्मेलन संग धेरै कुराकानी सहभागीहरू अहिले सम्भव छैन । ठूलो फाइदा को अन्त छ -देखि-अन्त इन्क्रिप्सन रूपमा पूर्वनिर्धारित पूर्व निर्धारित छ । कल गर्न मोबाइल र स्थिर नेटवर्क समर्थन साथै लागि एक शुल्क छ । सफ्टवेयर मा आधारित छ, खुला स्रोत छ । सबै कुराकानी संग र बिना च्याट गर्दै ट्याप-प्रमाण, गुप्तिकरण गरिएको छ, साथै मा, को गुप्तिकरण को च्याट-संचार सम्भव छ । भिडियो सम्मेलन समर्थित छैनन्, एक निर्दिष्ट माथिल्लो सीमा । कसरी धेरै सहभागीहरू गर्न सक्छन् एक सम्मेलनमा भाग लिन, मुख्यतः डाटा निर्भर को इंटरनेट कनेक्शन छ । संचार लागि अधिकतम गोपनीयता, तपाईं लगिन गर्न सक्ने सफ्टवेयर बिना पूर्व दर्ता मार्फत वेब ब्राउजर. तपाईं कुराकानी सुरु, प्राप्त गर्न एक लिंक पठाउन, यी, उदाहरणका लागि, ई-मेल द्वारा गर्न चाहेको कुराकानी साथी, र लिंक क्लिक गरेर भाग लिन्छ यो संचार । बिना काम गर्दछ साइन-मा ब्राउजर र डाउनलोड लागि तयार छ लागि विन्डोज, ओएस एक्स, लिनक्स. संग स्मार्टफोनको, कार्यक्रम काम ब्राउजर मार्फत छ । थप वैकल्पिक संग सुरक्षित अन्त-देखि-अन्त इन्क्रिप्सन को तत्काल दूत मृत्यु भएको छ । भिडियो टेलीफोनी, च्याट, पठाउन र चित्र र फाइलहरू समर्थित छन् । सफ्टवेयर बिना काम गर्दछ एक केन्द्रीय सर्भर लागि, गुमनाम र सुरक्षित डाटा प्रसारण को पियर-साथीहरूको नेटवर्क । प्रशस्त छन् अन्य कार्यक्रम जस्तै,,, एप्पल सामना समय, वा गुगलको जोडी, जो प्रस्ताव यस्तै कार्यहरु रूपमा.
आफ्नो जानकारी को सुरक्षा विरुद्ध अनाधिकृत छ वैकल्पिक मा प्रस्तुत, तर, अधिक संभावना छ
त्यसैले गर्न, उदाहरणका लागि, समर्थन को अन्त-देखि-अन्त इन्क्रिप्सन, आफ्नो व्यक्तिगत डाटा भूमि हुनेछ, तथापि, मा एक सर्भर मा हामीलाई, र डाटा वा निर्देशित आमाबाबुले कम्पनी. के तत्काल दूत संग भिडियो टेलीफोनी आफ्नो मनपर्ने छ? संकलन डाटा यहाँ प्रक्रियामा गरिनेछ द्वारा होस्ट युरोप को प्रकाशन गर्न आफ्नो योगदान यो ब्लग ।
← कहाँ पूरा गर्न एक जर्मन नागरिक । फोरम को अध्ययन मा जर्मन भाषा, जीवन र अध्ययन मा जर्मनी
कहाँ पाउन गर्न इन्टरनेट को वार्ताकार को जर्मन भाषा अनलाइन मुक्त लागि →